प्रडक्ट इन्फो Archives - Page2of 25 - Living with ICT
Home / प्रडक्ट इन्फो (page 2)
टेलिकमले ल्यायो ‘वाउ टाइम’ मोबाइल एप्स, अब मोबाइलबाटै लाइभ टिभी हेर्न सकिने
Sep 20, 2017	0
नेपाल टेलिकमका मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताले अब लाइभ टिभी, मुभी र विभिन्न विधाका भिडियो तथा एफएम एउटै मोबाइल एप्समार्फत हेर्न तथा सुन्न सक्ने भएका छन् । यस प्रकारको सेवा उपलब्ध गराउने एप्स ‘वाउटाइम’ (WOWTIME) हिजो मंगलबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ । नेपाल टेलिकम र विन नेपाल प्रा.लि.को सहकार्यमा सो एप्स सञ्चालनमा आएको हो । सो एप्समार्फत लाइभ टिभी, मुभी तथा भिडियो हेर्न …
पाको मोबाइल बजारमा मोबाइल किन्दा बम्पर उपहार
काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा पुरानो र विश्वसनिय मोबाइल बजारको रुपमा परिचित पाको मोबाइल बजारले पाको यूथ क्लबको सहकार्यमा दशैं, तिहार र छठको अवसर पारेर प्रबद्र्धनात्मक योजना सार्वजनिक गरेको छ । काठमाडौंको मुटुमा रहेको पाको मोबाइल बजारले ‘होस गर्नुस् कम्प्लेक्समा मोबाइल किन्दा, पाको मोबाइल बजारमा मोबाइल किन्दा छैन चिन्ता’ योजनाअन्तर्गत दशैं, तिहार र छठको अवधिभर मोबाइल खरिद गर्ने ग्राहकहरुलाई बम्पर पुरस्कारमा …
सगुनको मोबाइल एपको डेमो सार्वजनिक, स्मार्टकार्ड पनि आउने
Sep 18, 2017	0
सोसल ई–कमर्श साइट सगुनले मोबाइल एप्लिकेशनको पहिलो डेमो सार्वजनिक गरेको छ । भारतमा रहेको सगुनको कार्यालयले यो डेमो प्रस्तुत गरेको हो । हालै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मिनी आइपिओ जारी गरेर दोस्रो चरणको लगानी जुटाइ रहेको सगुनले मोबाइल एपको परिक्षण गरिरहेको छ । नेपालीले स्थापना गरेको सोसियल इकमर्स कम्पनी सगुनले दक्षिण एशियाली बजारलाई लक्षित गरेर मोवाइल एप ल्याउन लागेको हो । ‘हामीले सगुनको …
एप्पल वर्ल्डले ल्यायो ‘अफरभित्र पनि मेगा अफर’
दशै र तिहारको अवसर पारेर एप्पल वर्ल्ड मोबाइलले ‘अफरभित्र पनि मेगा अफर’ योजना ल्याएको छ । काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित मर्कण्टायल प्लाजामा रहेको मल्टिब्राण्ड मोबाइल शोरूम एप्पल वल्र्डले मोबाइल खरीद गर्ने ग्राहकलाई हात खाली नजाने उपहारका साथै विभिन्न बम्पर उपहार दिने योजना ल्याएको हो । योजनाअन्तर्गत मोबाइल खरिदमा हात खाली नजाने उपहार पाउने बताइएको छ । अफरअन्तर्गत मोबाइलका मोडलअनुसार ६० प्रतिशतसम्म छूट …
भदौ २९ देखि राजधानीको भृकुटीमण्डपमा आयोजित “सुबिसु क्यान कमटेक २०१७” सम्पन्न भएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धन गर्ने उद्धेश्यले आयोजित प्रदर्शनीको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले विहिबार उदघाटन गरेका थिए । मेलामा कुल एक लाख १६ हजार ३ सय १८ जनाले अवलोकन गरेको क्यान सचिवालयले जानकारी दिएको छ । यस संस्करणको क्यान कमटेकमा कम्युनिकेशन र …
१२ सय रुपियाँमा सुबिसुको ७ एमबी इन्टरनेट
Sep 15, 2017	0
सुबिसु केबल नेट प्रालिले दसै तिहारको अवसर पारेर नयाँ योजना ल्याएको छ । काठमाडौंमा जारी क्यान कमटेकको अवसर पारी विहिबार सार्वजनिक गरिएको नयाँ योजनामा ७ एमबिपिएसको अनलिमिटेड फाइबर इन्टरनेट केवल १२ सयमा उपलब्ध गराउने जनाएको छ । साथै कमटेकको शीर्ष प्रायोजक रहेको सुबिसुले अवलोकनकर्तालाई लक्षित गरेर विभिन्न आकर्षक अफरहरु सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले मेलामा इन्टरनेट र डिजिटल टिभीको कम्बो अफरहरु पनि ल्याएको …
अफर दिने छिट्टोे (chitooo) एप
नेपालमा अहिले धेरै स्टार्टअप कम्पनीहरु नवीन विचार लिएर आउँदै छन् । र, यही प्रवाहमा एक नयाँ एप हो, छिट्टो (chitooo) । गत ७ जुलाईमा काठमाडौंमा सार्वजनिक गरिएको एप प्ले स्टोरमा उपलब्ध छ । छिट्टोे यस्तो एप हो, जसले प्रयोगकर्तालाई फेसबुकका माध्यमबाट उपहार अंक प्रदान गर्दछ । यी अंकहरुलाई पछि प्रयोगकर्ताले रेस्टुरेन्टलगायत अरु साझेदार स्टोरहरुमा खर्च गर्न सक्छन् । एपमा साइनअप गर्न …
नेपालमा पहिलो पटक ‘फ्यान्टसी लिग’ सुरु, कसरी खेल्ने ?
नेपालमा पहिलो पटक ‘फ्यान्टसी लिग’ सुरु भएको छ । यसको लोकप्रियाता अचम्मलाग्दो किसिमले अघि बढिरहेको छ । खेलप्रेमी र नयाँ पुस्ता बिचमा एकाएक चर्चामा आएको ‘फ्यान्टसी लिग’ कहाँ छ, कसरी सम्पर्कमा पुग्नेबारे ‘योङ’ खेलप्रेमीहरुमा जिज्ञासा पनि हुन सक्छ । के हो यो लिग ? यस प्रकारको लिगबारे पक्कै पनि धेरैजना अनविज्ञ हुनुपर्छ । काल्पनिक माहोलमा सामाजिक संजालमा खेलिने फुटबलका थुप्रै …
अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको एक्स ल्याब (x-lab) ल्यापटप ब्याग नेपाली बजारमा
Sep 12, 2017	1
ल्यापटप ब्याग तपाइको ल्यापटपपछिको महत्वपूर्ण आवश्यकता हो । गुणस्तरीय ल्यापटप ब्यागले तपाईंको अमूल्य डेटा भएको ल्यापटपको सुरक्षा मात्र नगरी, तपाईंको भविष्यमा हुन सक्ने धेरै हानीबाट पनि जोगाउछ । ल्यापटप मात्र अट्ने सामान्य ल्यापटप ब्यागलाई पछाडि उछिनेर एक्स ल्याबले अन्तर्राष्ट्रियस्तरका नयाँ ल्यापटप ब्यागहरु नेपाली बजारमा विस्तार गरिरहेको छ । धेरै अनुसन्धान गरेर तयार गरिएका यी ब्यागहरु उत्कृष्टताको नजीक देखएका छन् । …
जोनरिचको मल्टीफंक्सन इलेक्ट्रनिक क्यास रजिस्टर र रसिद प्रिन्टर नेपाली बजारमा
प्रविधि बिकासको चरम बिन्दुमा पुगेको बेला नेपालको व्यवसाय र व्यापार क्षेत्र भने आहिले पनि २ पुस्ता आगडीको तरिकाबाट संचालन भैरहेको छ । सगर वितरण प्रालिले नेपाली व्यवसाय र व्यापार क्षेत्रलाई प्रविधि संगै डोराउने लक्ष्य बोकेको छ र नेपाली बजारमा जोनरिचको मल्टीफंक्सन इलेक्ट्रनिक नगद दर्ता, नगद दराज र रसिद प्रिन्टर जीक्यु इसीआर८०० ल्याएको छ । खुद्रा व्यापार, खानपान व्यापार लगायत सबै …